トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ Jikelele evulekile-ukuphila we eshintsha pachinko, sici-ukubona ngokusebenzisa indlela
※ zokugcina Sicela ubheke njengoba isimo sonke umkhakha
pachinko yakhiwa komunye umdlalo amakhasimende kanye izitolo ukuthi mane noma ulahlekelwe. Yize kunjalo, uma njalo ulahlekelwe, ngoba amakhasimende kayikuza esitolo ngokushesha, pachinko emakhazeni uhlangothi, okuphindiwe noma walulama futhi aphume, uzoqhubeka yini ukukhulula ikhasimende. Ezweni kwalezi zindlela, kungakhathaliseki Minukeru kwesikhathi ukuvulwa, uba zinomthelela omkhulu ematfuba ngokuwina.
isikhathi ukuvulwa, iyohluka for esitolo ngamunye. I ufuna ukwazi okokuqala, ukusho ukuthi isigaba ukuvulwa wamakhaza pachinko, hhayi ukuzibophezela udaba, ukuze lula emhlabeni ekuqaleni ngezipikili kushintshwe, ukuze ibhola akusho yehle, yokuthi futhi kushintshwe emhlabeni izinzipho kuzoba. Noma, sikhuphule noma sehlise isimo Horukon, aliveli out, ngoba ROM kunqunywa, Angazi ukuthi ohlangothini ukuphathwa sika.
Nokho, kungakhathaliseki ukuthi ukulungisa nail ukuba eziningi ukujikisa, by, ngokwesibonelo, zihlanganisa iqoqo Horukon, ngokwandisa inani lottery izikhathi ROM, kuyoba lula ukuba hit. Kuyinto, mina into udaba livele kusukela pachinko emakhazeni ohlangothini esimweni esinjalo. Iphuzu, khumbula.
into okuthiwa isikhathi inkinga, ngaphandle engxenyeni lokuqala lwenyanga, uma kukhona emakhazeni pachinko engxenyeni yokutakula yesibili, kukhona yebo okuphambene nalokho. Ngakho, ukwazi izimfanelo wamakhaza pachinko kwesizini evulekile, zama ukuqonda ukuphila evulekile esitolo Ukudlala wonke umuntu. Okokuqala, isikhathi kuthiwa inkathi yokuzingelwa, Uyoletha e eziningi maphakathi no-cishe inyanga, hhayi kuphela ngesikhathi esithile, ezimweni ezahlukene ngenyanga, eqinisweni, ikhona.
inhloso oluthile, kusukela kulo mcimbi kokukhipha wenkokhelo, 's isikhathi ukuthi ezinsukwini ezimbalwa ezizayo kukhona evulekile kakhulu. Uma umcimbi eyintothololo, ungakwazi abaningi ukuba ashiye izinsuku ezimbalwa nail ukulungiswa.
Ngaphezu kwalokho, ngisho esimweni inkokhelo kanye nokusebenza, yokuthengisa inzalo enkulu njengoba imicimbi ehleliwe, ukuze ukuheha amakhasimende ngasekupheleni nokuvulwa ngenyanga, ngoba kukhona inombolo yecala model njengo kuba ezinhle kulungiselelwa nail ukulungiswa , Hall emva umcimbi omkhulu Kufanele ahlale eqaphile. Ngemva
imicimbi, futhi onobuhle ezifana umculo othandwayo namuhla, amamodeli Kunconywa, ngicabanga ukuthi naye umqondo omuhle inselele ngenxa yethuba okusezingeni eliphezulu. Ukusebenza kuhloswe ukuba kuthonywa kakhulu sezulu. Ngosuku olulandelayo, lapho kukhona Isibikezelo sezulu kulahleka khona, kukhona kungenzeka ukuthi ukukhiqizwa liyana.
Ngezikhathi ezinjalo, noma evulekile nail kancane, ngisho noma kulungiselelwa okusezingeni eliphezulu ukatelelwa, mayelana nesizinda phakathi futhi kungenzeka angene amayunithi eziningana. Isimo sezulu nosuku olubi ngalokho, iqonde ubuyele emuva hhayi, ungase uhambe uyazombeza kancane, itafula kakhulu kutholakala. Khona-ke, ufuna sikwenze ekupheleni usuku esikhundleni Xintai.
Xintai ngosuku lokuqala, ilindele kamuva ukuheha amakhasimende ngosuku olulandelayo, kukhona esitolo ukukhipha imali. Kungakhathaliseki isizini evulekile, it kungaqinisekiswa ngesivinini ukujikeleza ka at yizinkulungwane yen. Ijubane ukujikeleza we yen yinkulungwane, kakusekho umugqa umngcele, ukuthi uvule kuqale nail. Endabeni pachinko eshintsha zazo kushintshwe Horukon, nakhu okuye kwashiwo ukuba noma ukulungisa big hit okungenzeka. Ngosuku lapho kuthiwa evulekile-ukuphila, imayelana amathathu cishe.
ethize wahlola akugcini nje ukuhlola indlela Robo idatha ngokusebenzisa eziningi pachinko eshintsha can. Noma, kuphela esitolo ukuthi ihlangene namasevisi, ezifana idatha Robo indawo Seven zingenza bambeli iyisevisi enjalo. , Ufuna aim ekupheleni usuku esikhundleni Xintai.
ethize wahlola akugcini nje ukuhlola indlela Robo idatha ngokusebenzisa eziningi pachinko eshintsha can. Noma, kuphela esitolo ukuthi ihlangene namasevisi, ezifana idatha Robo indawo Seven zingenza bambeli iyisevisi enjalo.